जड सुगौली सन्धि, समस्या १९५०
नेपाल भारतवीचको सीमा बिबादको जड सुगौली सन्धि हो । त्यो सन्धिलाई १९५० को सन्धिले खारेज गरिसकेपछि ती गुमेका भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने हो । भारत सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिन तैयार छैन, अझ ६०६ बर्गकिलोमटर नेपाली सीमा पो मिचेछ । नेपाल भारतवीचको सुमधुर सम्बन्धको चर्चा गरेर नेपाली नेता थाक्दैनन्, भूगोल मिच्न दिएर खुशी हुने ?
संसारमा यस्ता पातक नेता मैले देखेको छैन । हामीलाई अर्काको भूमिको लोभ छैन, आफ्नो भूमि त बचाउनु पर्‍यो । आफ्नै जन्मभूमि बचाउन सक्दैनौं भने अर्काको हस्तक्षेप, अतिक्रमणमा पनि खुशी हुने यो कस्तो जाति हो ? यस्ता नेता विश्वका कुनै पनि मुलुकमा देख्न पाइदैन, जो नेपालमा देखिन्छ ।
भारत पाकिस्तानवीच काश्मिर समस्या छ । १९४७ मा भारत पाकिस्तान टुक्रियो । भारतका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा उभिएर काश्मिरी जनताले आफ्नो निर्णय आफै गरुन् भनेर घोषणा गरे । राष्ट्रसंघमा यो निर्णय पारित पनि भयो तर ३ पल्ट युद्ध भइसक्यो, भारतले काश्मिरलाई त्यो अधिकार दिएन । आजकल भारत भन्छ, काश्मिर भारतको अभिन्न अंग हो । भारतले ५ लाख सेना तैनाथ गरेर काश्मिरी भूमिमा शासन गरिरहेको छ । यो अचाक्ली विश्वलाई थाहा छ ।
अचाक्ली हस्तक्षेप नेपालमाथि पनि भारतको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्तामा भारतीय शासन छ । नेपाली शासक कस्ता, ती क्षेत्र भारततिर पारेको राष्ट्रिय निशासनछाप समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । यति हुस्सु नेता र प्रशासक भएको देश शायद विश्वमा भेटिदैन । यिनै हाम्रा नेता भन्छन्– हामी प्रजातन्त्रवादी, हामी स्वाभिमानी, स्वाधीनताका पक्षधर । अचम्म होइन ?
नेपाली भूमि भारतको नक्सामा पार्न सहमति जनाउने को को हुन् ? यस विषयमा तत्काल शक्तिशाली आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ । यसमा नापी विभागका कर्मचारीदेखि सचिव, मुख्यसचिव, सरकार प्रमुखहरु जोसुकै हुन्, तिनलाई काँडे कोर्रा हान्नुपर्छ । देश भनेको कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको बपौति होइन ।
एकइन्ची भूभाग पनि कसैले दिने अधिकार कुनै शासकलाई छैन । सन २०११ को डा.बाबुराम भट्टराईको सरकार, जसलाई भारतीय प्यादको आरोप छ, त्यस्ताले सही गर्न नसकेको नक्सामा त्यसपछि कसले सही गर्‍यो, बदमास को को हुन्, अव त्यसको खुलस्त जानकारी आमनेपालीले पाउनैपर्छ । यो सतर्कताको समय हो ।